နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: December 2008
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:47 PM 17 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:24 PM 15 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးခဲ့ပြီး ခုထက်တိုင် ကြိုက်နေတဲ့ ၊ ကြိုက်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ကွယ်လွန်သူ အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ပါ...။
မှတ်မှတ်ရရ ဒီသီချင်းကို ရှစ်တန်း အစိုးရစစ် တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ စာစုကျက်တော့ ကြားမိတဲ့ သီချင်း ထင်တာပဲ။ ဆောင်းနှင်းဖုန်ဖုန် ကျတဲ့ နတ်တော်၊ ပြာသိုညချမ်းတွေမှာ ဒီသီချင်းကို စာစုကျက်တဲ့ နေရာကို မသွားခင် ခဏတစ်ဖြုတ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရာကနေ ကြားမိပြီး ကြိုက်သွားတာ...။
ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေကတော့ အကုန်ကြိုက်တယ်...။ အနှစ်တွေချည်းပဲ...။ အခု သီချင်းလေးကတော့ “အတ္တပုံဆောင်ခဲများ” အခွေထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ “ချစ်သူ့လက်ဆောင်” လို့ အမည်ရပါတယ်။
Credit to : အိပ်မက် Youtube
ဒီသီချင်းရဲ့ အမ်ပီသရီး ဗားရှင်းကိုတော့ မြန်မာ အမ်ပီသရီးဒေါ့နက် မှာ သွားရောက် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
(သီချင်းအကြောင်း ရေးရင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သီချင်းတွေ အကြိုက်တူတဲ့ မမေကို သတိတောင် ရနေပါသေးတယ်။ မတွေ့တာ ကြာလို့ နေကောင်းလား၊ အဆင်ပြေလားလို့ တွေးနေမိတယ်။ သီချင်းချိုချိုအေးအေး လေးတွေကို ရှာလာတတ်ပြီး မျှဝေတတ်တဲ့ မမေကို လင်းနစ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာည သီချင်းကြားတိုင်း သတိရနေတယ်...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:29 PM 17 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: htoo ein thin, song
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:52 AM 22 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Last Christmas (Wham) : Original
Last Christmas (Disco Version)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:25 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Photo Credit : BoyGeniusReport
Smart ဖုန်း တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာပါပြီ။ Google ရဲ့ Open Source OS အိုအက်စ် ဖြစ်တဲ့ Anthroid ကို အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ G1 ဖုန်းထွက်လာတာ မကြာသေးပါဘူး။ အခု သတင်းထွက်နေတာကတော့ နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ် G2 ဖုန်း ထပ်ထွက်လာတော့မယ်တဲ့။ Anthroid OS ကိုပဲ သုံးထားတာပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများကြောင့် နောက်နှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ-ဧပြီလ ကြားမှာ ထွက်ရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါကြောင်း...။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှု။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:43 AM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Anthroid, G2, Google Phone
Its very amazing about your eyes.
Possible to read anything? If not, then follow the guidelines given below
Credit to : Wooem (Fwd mail)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:06 PM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
၀ိုင်ဝိုင်းနဲ့ ကြိုးကြာတို့ နှစ်ဦး သီဆိုထားတဲ့
ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။
ငိုကြွေးခြင်းများနဲ့ မင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်။
အိပ်လိုက်တော့ မင်းမျက်လုံးတွေ မှိတ်လိုက်
မင်းအလွမ်းများကြောင့် ငါ မော....တယ်...။
ဒီအချိန်မှာ သူပြန်လာကာ မနှစ်သိမ့်ဘူးလေ...
မျက်ရည်များ ဒီညနဲ့ အတူ ချန်ခဲ့...။
ဘယ်လောက်အထိ ပေးဆပ်ခြင်းတို့ နင်ပေးလဲ
သူမင်းအတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် လုံးဝ မရှိဘူး...။
အိုး.. မေ့လိုက်ပါ... ကြိတ်မှိတ်ပြီး မေ့လိုက်ပါ
မင်းရဲ့ရှေ့မှာ အလှပဆုံး မိုးကောင်းကင်
Credit to : Nyakabyar
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:27 AM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
(အချပိုဒ်တွင် ပညာမပြည့်မှီ၍ စည်းဖေါက်ထားပါသည်။ ငယ်သူငယ်ချင်းကို သတိရမိ၍ ရေးမိပါသည်။ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သော စာမျက်စေ့နှင့် ချင့်ချိန်ဖတ်ပါကုန်...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:58 AM 18 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အထူး အရေးကြီး သတင်း
အခုတစ်လော ထိပ်တန်း Internet Browser ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နဲ့ Firefox Mozilla တို့က သူတို့ ထုတ်ကုန် ဖြစ်တဲ့ IE နဲ့ FireFox Browser အတွက် တွေ့ရှိနေတဲ့ ဟာကွက်တွေကို ဖာထေးဖို့ အဆင့်မြှင့် Update Patch များကို ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။
ညီမလေး နေနေနိုင်က သူ့ဘလော့ဂ်မှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ IE အတွက် update patch များကို တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Firefox အတွက် တင်ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ မြေခွေးမီးလျှံ ဘရောက်ဇာ သုံးသူများ အခု ဒီလင့်ခ်မှာ နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ဖြစ်တဲ့ Firefox 3.05 Version ကို Download လုပ်ပြီး အဆင့်မြှင့် upgrade လုပ်နိုကပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ ကွန်ပြူတာတွင်းရှိ အဖိုးတန်၊ အရေးကြီး အချက်အလက်များကို မသမာသူ အွန်လိုင်းဖေါက်ထွင်းသမား Hackers များ လက်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်ပါက Anti Virus Program, Internet Security Program များ တပ်ဆင် သုံးစွဲဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
Download here for Firefox 3.05
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:12 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Browser, Firefox, update
ခေါင်းစဉ်လေး လူဦးသွားမှာ စိုးလို့...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:57 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:34 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
နှုတ်ထွက် ဆိုဝံ့ မဆိုဝံ့။
သေပွဲ ဝင်ဝံ့ မဝင်ဝံ့။
လိုတိုင်း ဝယ်ဝံ့ မဝယ်ဝံ့။
(လုပ်ဖို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတာတွေ ချရေးမိပါတယ်။ အတည်ရေးလို့ မရတော့တဲ့ လက်ကြောင့် ပေါက်တတ်ကရ ဖြစ်သွားတယ်။ မေတ္တာပို့ကြပါကုန်။ သာဓု၊ သာဓု။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:31 PM 14 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အီးမေးလ်ထဲက ရတဲ့ ဟာသ တစ်ပုဒ်ပါ။ ရေးသူမသိပါ။ အလွန်ရီရလို့ မိတ်ဆွေများ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အများသုံး အိမ်သာတစ်ခုထဲ ၀င်ပြီး ကမုတ်ထဲထိုင်ရုံ ရှိသေးသည်။ ဟိုဖက်အိမ်သာထဲက လူက လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အလ္လာပသလ္လာပ စကားပြောရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည်။ မကောင်းတတ်တော့လည်း ပြန်နှုတ်ဆက်ရသည်ပဲပေါ့...။
အသေအချာ အကျအနထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိစ္စကို ဆက်ရှင်းမည် ကြံကာရှိသေး...။ အလိုက်မသိတတ်သော ငနဲသားက ထပ်မေးလာပြန်သည်။
ဟာ… ဒီလူတော့ ခက်ပြီ...။ ဘာလဲကွာ… ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဂွတီးဂွကျမေးခွန်းတွေ လာမေးနေတာ ..။ ဘာလဲ….။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ထပ်ထွက်လာပြန်သည်။
ဗုဒ္ဓေါ……. ဒီလူ ဘယ်လိုလူလဲ...။ ဂေးလား. ဂျော်ရကီးလား. ဘာကောင်လဲကွာ…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျင်လည်ကျက်စားနေရာ နေရာမဟုတ်၍ သတိတော့ ထားနေရသည်။
"မလုပ်နဲ့လေဗျာ. ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာ...။"
"နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်. ဟိုဖက်အခန်းထဲက သောက်ပေါတစ်ကောင်က ရူးသလို နှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့….။"
မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲ ရီချလိုက်ပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:54 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:27 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:25 AM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Photo : www.wowinsider.com
နောက်က အုပ်စုလိုက် လိုက်နေသံကို ကြားရတယ်...။
အာခံတွင်းထဲက ခြောက်ကပ်နေတဲ့ မောဟိုက်သံကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ကြားနေရတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူရပ်နေလို့ မရဘူး။ ကိုယ်ပေါ်မှာ ခြစ်မိတဲ့ ဆူးတွေ၊ နင်းမိတဲ့ ဆူးပြွမ်းလမ်းပေါ်က ကျောက်စရစ်ကြမ်းတွေ၊ ကန္တာရဆူးခြုံတွေ ဒဏ်ကို သူသတိ မပြုမိဘူး။ ဒဏ်ရာတွေက သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ထွက်နေတာကို ဂရုမထားအားဘူး။
လောလောဆယ် အတွေးအာရုံထဲမှာ လွမ်းမိုးနေတာကတော့ အသက်ဘေးကနေ လွတ်အောင် ပြေးဖို့ပဲ...။
3 နာရီဆက်တိုက် မရပ်မနား ပြေးလွားနေရတော့ သူ့ခြေထောက်တွေ နွမ်းနယ်လာတယ်။ သူ့နောက်က အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ လိုက်နေတုန်းပဲ။
သူ့နှလုံးခုန်သံ တစ်ဒိန်းဒိန်း ရိုက်ချက်ဟာ သူ့နားထင်သွေးကြောကို တစ်ချက်တစ်ချက် လာလာ ဆောင့်နေတယ်။ သူလွတ်နိုင်မလား။ အစက တင်းထားခဲ့သမျှ စိတ်တွေ လျော့ချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်က တွေးနေပေမယ့် ပြေးနေတဲ့ နှုန်းကို မလျော့မိဘူး။ နောက်ကလဲ လိုက်လာတဲ့ အသံတွေ ကြားနေတုန်းပဲ။ ပင်စည်တွေ၊ ချုံပုတ်တွေ သူ့နောက်မှာ ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲ ကျန်နေခဲ့တယ်။
လရောင်ကတော့ အဇဋာ မိုးကောင်းကင်မှာ လင်းပနေလို့။
လရောင်ကို တပ်မက်ဖူးတဲ့ သူ၊ ဒီတစ်ခါတော့ လရောင်ကို မုန်းနေတယ်။ သူရှိရာကို မြင်နိုင်တယ်လေ။
လရောင်ကွယ်တဲ့ အပင်တွေကြား သူတိုးဝင် ပြေးတယ်။ ခပ်ဝေးဝေးဆီက လှစ်ခနဲ၊ လှစ်ခနဲ လိုက်လာတဲ့ အရိပ်တွေကို မျက်ဝန်းထောင့်မှာ သူတွေ့နေရတယ်။ အန္တရာယ်တွေ သူ့နားကို တော်တော်နီးနေပြီ။ အားစိုက်ထည့်ပြီး ထပ်ပြေးတယ်။
ရှေ့မှာ ရေစီးသံသဲ့သဲ့ကို ကြားလိုက်တယ်။ သူအားတက်သွားတယ်။ အနည်းဆုံး ရေတစ်ပေါက်တော့ သောက်ရမယ်လေ။ အားတက်သရောနဲ့ ပြေးသွားတော့ ရှေ့မှာ ဘာ အတားအဆီးမှ မတွေ့တော့ပါလား။ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်နေတယ်။
ချောက်ကမ်းပါး စွန်းမှာ သူရောက်နေတာကိုး။
ဆောင်းလေအေးက ဟိုးချောက်ကမ်းပါး အောက်ဘက်ကနေ အပေါ်ကို ပင့်တိုက်လာတာ သူခံစားလိုက်တယ်။ ချွေးစေးတွေနဲ့ မောဟိုက်နေတဲ့ သူ... တစ်ခဏလောက်တော့ အပန်းပြေသွားတယ်။
အသံကြားလို့ နောက်လှည့်ကြည့်တော့ အန္တရယ်က လက်တစ်ကမ်းမှာ။
နောက်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆုတ်မိတယ်။
ဟိုးအောက်နားက ရေစီးသံ ပိုပို ကျယ်လာတယ်။ ချောက်ကမ်းပါးစွန်းက ခဲလုံး နင်းမိလို့ ကိုယ်တစ်ချက် ယိုင်သွားတယ်။
ကျောက်စိုင် ကျောက်ခဲ တစ်ချို့ ပြုတ်ကျသွားတယ်။
လရောင်အောက်မှာ ၀င်းကနဲ ဖြစ်သွား...
သူ့ဆီကို အငမ်းမရ တိုးဝင်လာ...
လည်မျိုနားမှာ တစ်ချက် စူးကနဲ ဖြစ်သွားယ်။
သွေးတွေ ... သွေးတွေ...
Photo : Storytimeout
လမင်းကြီးတောင် အနီရောင် ပြောင်းသွားလေသလား...။
မျက်လုံးထဲ အမှောင်တိုက် တိုးဝင်လာ...
စမ်းရေစီးသံ တစ်ဖြည်းဖြည်း တိုးတိတ်သွား...
ပိန်းပိတ်တဲ့ အမှောင်ထုကသာ တိုးဝင်...
ချိုမြတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ခံစားပြီးတော့ အဆုံးစွန်သော အစွန်း တစ်ဘက်ဆီသို့...
အကျည်းတန်တဲ့ မြင်ကွင်းကို မျက်ကွယ်ပြုလို့... ထက်အာကာ မိုးကောင်းကင် အဇဋာမှာတော့ တိမ်ညိုပုပ်တွေ ကင်းစင်နေတဲ့ လပြည့်ည လမင်းကတော့ ထိန်ထိန်သာနေတယ်...။
လရောင်တွေ ဖျန်းပက်နေတဲ့ တစ်ခဏမှာ ကြယ်တစ်ပွင့် ရုတ်ကနဲ ကောင်းကင်ထက်က ကြွေဆင်းသွားတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:50 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Photo : Cake Design
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အခါသမယပါ...။
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကောက်ရတဲ့ ဘလော့ဂါအစ်မကြီးရဲ့ နောက်တစ်ဖန် ကျရောက်လာပြန်တဲ့ အခုလို မွေးနေ့ အခါသမယမှာ စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ ပြည့်စုံပြီး လိုရာဆန္ဒ ၊ တောင့်တအပ်သော လိုအင်များ ပြည့်စုံပါစေဗျား...။
အစ်မကြီး လူသိရှင်ကြား တောင်းသော၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် တောင်းသော၊ လူမသိတစ်သိ တောင်းသော ဆုများ ပြည့်စုံပါစေလို့ ကူညီညာလို့ ထပ်လောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...။
ပျော်ရာအရပ်မှာ မိမိ ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့... ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျား...။
ချမ်းအေးတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းရာသီ အခါသမယမှာ မွေးဖွားခဲ့သလို ဘ၀တစ်လျှောက်မှာလဲ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်နိုင်ပါစေ...။
ကဲ... မွေးနေ့ဆုတောင်းကိုတော့ သေသေချာချာ ဆုတောင်းပေးပြီးသွားပြီ...။
မောင်ဘွိုင်းတို့ရဲ့ ထုံးစံအရ ပေါက်တတ်ကရလေး တစ်ခုခုမှ မလုပ်လိုက်ရရင် စားမ၀င် အိပ်မပျော်တဲ့အတွက် ရိုးရာလေး မပျက်ရအောင် စလိုက်ရအောင်လား...။
ဆင်ထုံ၊ ပေါက်ထုံ၊ လင်းထုံ၊ မေထုံ၊ မချိုသင်း၊ တီဇက်အေ၊ ကျောက်တိုင်ကြီး strike နဲ့ အမ်းမားရဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့...။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ မွေးနေ့ရှင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း သီချင်းလေး ဆိုရမှာပါ...။
Happy Birthday To you.. ဆိုတဲ့ မွေးနေ့ သီချင်းလေး အလိုက်ကို ရကြပါတယ်နော်...။
အခုတော့ အမ်းမားရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ အားလျော်စွာ... ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် အဲဒီမူရင်း သီချင်းထဲက စာသား တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်...။
အဲဒီ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အတိုင်း ဆိုရင်းနဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းကြပါစို့...။
You Are Monkey And Donkey...
အမ်းမား .. makeawish and blow the candles....
အမ်းမား မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်က ထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်များကို ဘယ်လိုပဲ မှုတ်မှုတ်.. ဖယောင်းတိုင်များက မီးမမှိတ်သွားပါဘူး...။ အံ့ဖွယ်သရဲပါပဲ...။
(ဘယ်ငြိမ်းမလဲ.. ဘွိုင်းက စီးတီးမတ်က မီးမငြိမ်းနိုင်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်ဝယ်ပြီး ထွန်းထားတာလေ...။)
အမ်းမားတစ်ယောက်တော့ ခုထိ ကြိုးစားပမ်းစား မှုတ်နေတုန်း....။
Photo : Clip Art
- ဆင်ထုံကတော့ မျက်နှာပျက်နေလေရဲ့...။
(သူက တစ်ကယ့် ဖယောင်းတိုင် ၀ယ်လာတာ။ ဘွိုင်းက အစားထိုးလဲလိုက်တာ)
- မေထုံကတော့ ငိုမဲ့မဲ့.. (မုန့်မစားရတော့မှာကို စိုးရိမ်လို့)
- ပေါက်ထုံကတော့ ဘွိုင်းကို မျက်စောင်းတစ်ခဲခဲ (သူက မလုပ်ပါနဲ့လို့ ဘွိုင်းကို တားတားတဲ့ကြားက သူ့အလစ်မှာ လုပ်လိုက်လို့)
- မချိုသင်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မျက်လုံးကလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ .. ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းကို မသိသေးဘူး...။
- ကျောက်တိုင်ကြီး strike ကတော့ လူအများ ကိတ်မုန့်ဘက်ကို အာရုံစိုက်နေချိန်မှာ မယောင်မလည်နဲ့ တီဇက်အေ အနား ကပ်သွားလေရဲ့...။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ပါ အမ်းမား...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:57 AM 14 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
တိမ်မျှင်ပုဝါပါးကနေ ခပ်စောင်းစောင်း ထိုးလာတဲ့ လရောင်။
သြကာသ လောက တစ်ခွင်လုံးကို အေးချမ်းသွားအောင် လွမ်းခြုံပေးတဲ့ လရောင်။
ညဉ့်လည်ယံမှာ အလင်းမျှင်ပါးပါးကို ယစ်မူးမိသူတိုင်း နောက်တစ်ခါ၊ အထပ်ထပ် အခါခါ တိမ်းမူးချင်လောက်အောင် လူတွေကို ဖမ်းစားတတ်တဲ့ လရောင်...။
ဒီလရောင်ဟာ လူတွေကို နူးညံ့စေတယ်။
ဒီလရောင်ကပဲ လူတွေကို ကြမ်းတမ်းစေတယ်...။
ဒီလရောင်ကပဲ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ဆွဲငင်သိမ်းကျုံး လှုပ်ရှားစေတယ်...။
ဒီလရောင်ကပဲ ကမ္ဘာဦး လူသားတွေရဲ့ နေမင်းကွယ်ပျောက်လို့ အမိုက်မှောင် ဖုံးနေချိန်မှာ အားငယ်နေတဲ့ စိတ်နှလုံးကို ချော့သိပ်တယ်...။
ဒီလရောင်ကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာတွေ ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။
Beethoven ရဲ့ လရောင်တေးသွား (Moonlight Sonata) ကို နားထောင်ဖူးပါသလား။
Moon River ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းကို သောတအာရုံထဲ ခဏလောက် ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ကြည့်ဖူးပါသလား...။
ဂျူးရဲ့ ၀တ္ထုဖြစ်တဲ့ “မြရဲ့လ” ကို အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်က အသံထွက်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ အသံထွက် ၀တ္ထု ကို ဖတ်ဖူး နားထောင်ဖူးကြလား။
Photo : http://vinblade.blogspot.com
လရောင်ကြောင့် ပြောင်းလဲခြင်းများစွာထဲက တစ်ခုကို ပြောပြချင်တယ်။
နားထောင်မယ်ဆို လရောင်အောက်ကို သွားကြစို့...။
(နိဒါန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်..။ ခေါင်းစဉ်မှာ အချီးလို့ တပ်ထားတာကို ရှုပ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:08 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
တစ်ခြားသော ဘလော့ဂ်တွေမှာ ပို့စ်တွေရဲ့ အောက်ခြေမှာ ကိုယ် သွားသွားပြီး ရေးထားတဲ့ comment တွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ပါ။
အရင်ကဆို ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ကပဲ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ လာရေးထားတဲ့ ကော်မန့်တွေကိုပဲ ဖျက်ခွင့်ရှိသလားလို့...။
အခုဆို ကိုယ်သူများဆီမှာ ရေးပြီးသား comment တွေကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်ချင်ရင် ပြန်ဖျက်လို့ ရနေပြီ...။
အရင်တုန်းက ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် သတိမပြုမိလို့ပေါ့...။
အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း သူများဆီမှာ ရေးထားတဲ့ ကိုယ့်ကော်မန့်တွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖျက်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကော်မန့် ဘေးနားက အမှိုက်ပုံးလေးကို နှိပ်ပြီး Delete လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ...။
မသိသေးသူများအတွက် အသစ် ဖြစ်သလို သိပြီးသူများအတွက် Reminder ပေါ့ဗျာ...။
Blog ကတော့ ညီမလေး နေနေ ဆီက ဘလော့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ နမူနာပုံကတော့ အဲဒီဘလော့ဂ်မှာ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တဲ့ ကော်မန့် ပါ။ အမှိုက်ပုံးကို အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:09 AM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Photo Credit : www.gamespot.com
ဆိတ်မွေးတဲ့ အိမ်မှာ ညညဆို ဆိတ်တွေကို အိမ်ခေါင်မိုးနားက ဆိတ်အိပ်တဲ့ နေရာကို Goat Walk လို့ ခေါ်တာတဲ့ ဆိတ်တစ်ကောင် လျှောက်စာ လမ်းကလေးကနေ ဆိတ်တွေကို အပေါ်ရောက်အောင် မောင်းသွင်းရသတဲ့...။ ဆိတ်ဆိုတဲ့ ကောင်မျိုးက မှောင်ရင် လန့်တတ်သကိုး...။ အဲဒီတော့ Goat Walk မှာ မီးလုံးလေးတွေ တပ်ထားပေးရသတဲ့...။ မီးပျက်တဲ့ညတွေဆို ဆိတ်တစ်ကောင်ကတော့ အနည်းဆုံး ပြုတ်ကျတယ်တဲ့..။ ပြုတ်ကျရင်လဲ ဇက်ကျိုး သေတာ ဆိုပဲ...။ ဆိုတော့ ညဏ်ကြီးရှင် ဆိတ်ထိန်းကောင်လေးက မီးလုံးလေးကို ခဏလောက် ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်တဲ့...။ မီးလုံးဖြုတ်တော့ ဘာဖြစ်သွားလဲ... ပရိသတ်ကြီးတို့...။ မီးမှောင်သွားတာပေါ့နော်...။ မှောင်တော့ ဘာဖြစ်လဲ...။ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့... မီးမှိတ်လိုက်လို့ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ပြုတ်ကျလာတဲ့ ကံဆိုးသူ မောင်ဆိတ်ဟာ မနက်ကျတော့ ဆိတ်သားဆီပြန် ဖြစ်ရောတဲ့...။ ကိုမိုဂျို ပြောတာလေ... အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အခု ပြုတ်ကျလု တည်းတည်း ဖြစ်နေတဲ့ ကြောင်ပုံကို ကြည့်ပြီး ကြောင်သားဆီပြန် စားကြည့်ချင်လိုက်တာ လို့ ပြောရင် ၀ိုင်းသတ်ကြမလားပဲ...။
Related Post : 121308
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:23 AM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:08 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ပန်းတစ်ပွင့်ကို နောက်ကျပြီးမှ ပွင့်အာတာ သိလိုက်တယ်...။
တစ်ကယ်တော့ အဲဒီနေက နေရောင်အတုမှန်း ပန်းကလေးက မသိရှာဘူး...။
ပန်းကလေးက ဖန်မီးချောင်းအောက်မှာ ပွင့်အာခဲ့တာဆိုတော့ အလင်းမြင်တိုင်း နေရောင်လို့ ထင်နေရှာတယ်...။
ပန်းလေးကို နေရောင်အောက် ရွှေ့ပေးမိတယ်...။
ဒါပေမဲ့ ပန်းလေးက သူ့ မီးချောင်က အလင်းကိုမှ မီးလို့ ထင်နေတော့တယ်...။
အော်... ပန်းလေးရယ်.... သဘာဝ အလင်းရောင်လေးကို မြင်နေတာတောင် အလင်းတုလို့ မြည်တမ်းနေတယ်...။
တစ်ကယ်တော့ ပန်းလေးက ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲ ပိတ်မိနေတဲ့ ပန်းဆိုတာ ပန်းပျိုးသူ မေ့သွားတယ်...။
ပန်းပျိုးသူက အဲဒီပန်းကို သဘာဝ အလင်းရောင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ အတော့်ကို ကြိုးစားရမှာပါလား...။
ဒီလို အသိတွေ ၀င်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပန်းလေးက ဖန်မီးချောင်းကို အလင်းစစ်လို့ ထင်သွားပြီလေ...။
ပန်းပျိုးသူရေ.... စိတ်မကောင်းပါဘူး...။ နောင်ပွင့်အာလာမယ့် ပန်းလေးတွေကို နေရောင်အောက် အချိန်မှီ ရွှေ့ပေးဖို့ ကြိုးစားပါလေ...။
(ပန်းပျိုးသူ ဖြစ်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး...။ ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုကို ရောက်ရင်းနဲ့ သဘာဝ အလင်းစစ်နဲ့ အလင်းတုကို မခွဲနိုင်တဲ့ ပန်းလေးအတွက် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ၊ နှမြောတသ ခြင်း များစွာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပန်းကြိုက်သူပါ။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:10 AM 15 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရတနာပုံတယ်လီပို့ အိုင်စီတီ ရက်သတ္တပတ်ပြပွဲတွင် ရောင်းချနေသည့် တစ်ခါသုံး GSM SIM Cardများကို ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း စတင်ရောင်းချတော့မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖုန်းကတ်များကို ရွှေဂုံတိုင် အရှေ့လမ်းမကြီးရှိ Mr. Fone Telecon Centre တွင် ဒီဇင်ဘာ(၁၃)ရက်(ယနေ့)မှ စတင်၍ ရောင်းချမည်ဟု သိရသည်။ ဖုန်းကတ် တန်ဖိုးများမှာ အက်ဖ်အီးစီ (၁၀)တန်နှင့် (၂၀)တန်ဟူ၍ ဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဖုန်းကဒ် သက်တမ်းမှာ အက်ဖ်အီးစီ(၁၀)တန်သည် (၂)ပတ်အတွင်းသုံးနိုင်ပြီး၊ အက်ဖ်အီးစီ (၂၀)တန်မှာ (၃)လအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ ဖုန်းကဒ် အသစ် ထပ်မံဝယ်ယူသည့်အခါ မူလနံပါတ်အတိုင်း ရရှိမည်မဟုတ်ပဲ နံပါတ်အသစ်တစ်ခု ရရှိသုံးစွဲရမည် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရောင်းချသည့် ဖုန်းကတ်များကို အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ငွေပေးချေ ဝယ်ယူနိုင်သကဲ့သို့ မြန်မာငွေလဲလှယ်နှုန်းထား တွက်ချက်ပြီးလည်း ကျသင့်သည့် မြန်မာငွေကျပ် တန်ဖိုးအတိုင်းလည်း ပေးချေနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဝယ်ယူလိုသူများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုပါက မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် နိုင်ငံခြား သားဆိုပါက ပတ်စ်ပို့မူရင်း ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရောင်းချမည့် တစ်ခါသုံးဖုန်းကတ် အရေအတွက်မှာ သောင်းဂဏန်းရှိကြောင်း Mr. Fone Telecon Centreမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ အနာဂတ်ကာလတွင် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုနေသည့် GSM SIM Card များကဲ့သို့ ငွေကြေးထပ်မံ ပေးသွင်းပြီး သက်တမ်းတိုးကာ မူလနံပါတ်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် Mobile Phoneများကို ရောင်းချသွားနိုင်ရန် အထူးစီမံ ကြိုးစားနေကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယခုကဲ့သို့ GSM SIM Cardများကို ဈေးကွက်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချပေးခြင်းကြောင့် ဖုန်းHandsetများ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းနှင့် အက်ဖ်အီးစီ(FEC)ဖြင့် ရောင်းချခြင်းကြောင့် အက်ဖ်အီးစီနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းထားလည်း မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်း ပြောကြားနေကြသည်။
Ref: TheVoiceWeekly (Vol. 5, No. 8 )
Prepaid GSM ကဒ်များ ရတနာပုံ အိုင်စီတီတွင် ရောင်းချပေးနေပြီ...။
(အိုင်စီတီပြပွဲတွင် ရောင်းချနေသည့် တစ်ခါသုံး အက်ဖ်အီးစီ ၁၀ တန် GSM Prepaid Card)
(Photo: LA MINN NAING(LMN, arrivel to Yatanarpon)
(ဖုန်းကဒ်များ အလုအယက် ဝယ်ယူနေကြသည်) (Photo: LA MINN NAING(LMN), arrivel to Yatanarpon)
(တစ်ခါသုံးဖုန်းကဒ်များ ရောင်းချသည့် နေရာ)
(Photo: LA MINN NAING(LMN), arrivel to Yatanarpon)
All Credit go to : http://myanmarictweek.com/
Photos Credit to : La Minn Naing (LMN)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:33 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: GSM, ICT, Mandalay, Myanmar, Prepaid, Telecommunication
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အီးမေးလ်ထဲက ပို့လာတဲ့ ကချေသည်မလေး တစ်ယောက် ကနေပုံလေးပါ...။
Credit : Unknown Creator in Chain Mail
လှုပ်မလှုပ်တော့ မသိဘူး...။ ကျွန်တော့ဘက်ကတော့ သူ ကနေတာ မြင်နေရတယ်...။ မလှုပ်ရင် ပုံကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ကြည့်ပါဗျာ..။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:29 PM 11 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ကွန်ပြူတာ သုံးတာလား.. အင်တာနက် သုံးတာလား... ဘလော့ဂ်စွဲတာလားတော့ မသိဘူး...။
ဘယ်ဘက်လက်ညိုးက ထိပ်မှာ အသားမာ တက်နေပြီ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:35 PM 13 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ (Ying Glaih Ying Jaep)
เปลี่ยนไป เป็นไม่มี เยื่อใยต่อกัน
အရင်က ဘယ်လောက်ပဲ အချစ်ကြီး ချစ်ခဲ့ပေမယ့်
อยากลืม ลืมทุกสิ่ง ลบล้าง เรื่องวันวาน
ဖြစ်နိုင်ရင် အရင်ချိန်တွေတုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေကို မေ့ပစ်ချင်တယ်။
တစ်ကယ်လို့ တို့နှစ်ယောက် ဆက်မတွေ့ဖြစ်ကြရင် မေ့တန်ကောင်းပါရဲ့။
အမှတ်ထင်ထင် ရှိတတ်တဲ့ မှတ်ညဏ်ကို အပြစ်တင်ချင်ရဲ့။
กดดัน ทำให้เรา เจอกันต่อไป
တို့နှစ်ယောက်ကို အမြဲတမ်း တွေ့ဖြစ်အောင် ကံကြမ္မာက ဖန်တီးနေခဲ့တယ်။
ပြန်ဆုံလေ ရင်နာလေ၊ ပိုခံစားရလေ။
ဝေးဝေးကို ပြေးပုန်းနေတာဟာ အကောင်းဆုံး အဖြေ ဖြစ်လေမလား။
တစ်ကယ် ချစ်ကြသူတွေအတွက် ဝေးကွာခြင်းဟာ ခဏတာ ခံစားရတဲ့ ချိုမြိန်ခြင်းပဲ။
မချစ်နိုင်တော့တဲ့သူတွေအတွက် နီးလေ ခါးသီးမှုကို ပိုခံစားရလေပေါ့။
နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် လမ်းတွေ ကိုယ်စီရှိခဲ့ပေမယ့်
ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่ เจ็บสักเท่าไร ก็ต้องรับมา
ရွေးချယ်စရာ လမ်းက များများစားစား မရှိခဲ့ဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မမြင်နိုင်တော့တဲ့ အထိ ဝေးကွာသွားစမ်း။
ရက်စက်တဲ့ မင်းမပါတော့တဲ့ ဘ၀သစ်ကို ပြန်စချင်တယ်။
မင်းရဲ့ အကြည့်တွေ မပါတဲ့ ဘ၀ကို ပြန်စချင်တယ်။
မတတ်သာလို့ ပြန်ကြုံလေတိုင်း ရင်နာမိတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရင်က မသိခဲ့ကြသလိုပဲ
ต้องเจอ กับสายตา เย็นชากันอยู่
အေးစက်စက် အကြည့်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ...
Inca ဆိုတာ အရင်က ယိုးဒယားမှာ အလွန်ကို နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ပေါ့ပ် သီချင်း အဆိုကောင်းတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။ အခု သီချင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ Masterpiece သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ Trade Mark လို့ ဆိုရမယ့် သီချင်းပါပဲ။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် လောက်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Inca ဆိုရင် Ying Klai Ying Jaeb သီချင်း၊ Ying Klai Ying Jaeb သီချင်းဆိုရင် Inca နဲ့ ဆိုပြီး တွဲသိလာခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီ သီချင်းကို နောက်ပေါက် အဆိုတော်တွေကလဲ New Version နဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ပြန်လည် သီဆိုခဲ့ကြတယ်။ ခုတော့လဲ သူတို့တစ်တွေလဲ အသက်ကြီးပိုင်းကို ရောက်နေပါပြီ။ တစ်လောကမှ ဒီသီချင်းကို ဦးလေးတစ်ယောက်က အမှတ်တရ ပို့လာပေးလို့ ဘလော့ဂ်ကြွလာ မိတ်သဟာများ ခံစားနိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ဘာသာပြန်စွမ်းရည်ကတော့ သိပ်မကောင်းလို့ ဖတ်မကောင်း၊ ခံစားလို့မရ၊ နားမလည် စတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာသာပြန်သူရဲ့ အရည်အချင်း မပြည့်ဝမှုလို့ သတ်မှတ်ပေးပါ။ နားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ သီချင်းရေးဆရာ တော်လို့ ဖြစ်ပါတယ်...။ သီချင်းကတော့ အတော့်ကို ခံစားရတယ်ဗျာ...။
Download here : "Ying Klai Ying Jaeb"
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:58 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:24 PM4ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး အလုပ်မှာ စိတ်မပါ့တစ်ပါနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ လာမယ့် ရက်အတောအတွင်းမှာ စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ ခရီးတစ်ခု ထွက်ရမယ်ဆိုတာကို သိနေတော့ စိတ်လက် မချမ်းမသာစွာနဲ့ လုပ်စရာရှိတာကို အီလေးဆွဲပြီး လုပ်နေဖြစ်တယ်။ မနက်ကလဲ မနက်စာကို ကောင်းကောင်း မစားဖြစ်ဘူး။ ၀က်နံရိုးခေါက်ဆွဲစားတာ ဂျုံခေါက်ဆွဲ ထည့်ပေးလိုက်လို့ နံရိုးက အသားတွေပဲ စားပြီး မိုင်လိုအေး တစ်ခွက်နဲ့ မျောချတယ်။ နေ့ခင်းဘက်ကျတော့ ကြာညို့များများနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ပုဇွန်ထမင်းကြော်ကို တို့ကနန်း၊ ဆိတ်ကနန်းပဲ စားပြီး Diet Coke နဲ့ မျှောချမိပြန်တယ်။ အစာအိမ်ထဲကို အစားအသောက် လောက်လောက်လားလား မရောက်တော့ ဦးနှောက်က တယ် အလုပ် မလုပ်ချင်ဘူး။ ပရိုဂရမ်တွေ ပြင်နေတာ ပြင်ပြီးသားကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြင်နေတယ်။ ဒါနဲ့ မှာထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို Supplier က လာပို့တယ်လို့ Purchase Dept: က လာပြောတာနဲ့ လုပ်လက်စ စိတ်မပါတဲ့ အလုပ်ကို ပစ်ချပြီး လာပို့ထားတာတွေကို Testing လုပ်နေလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညနေစောင်းရောပေါ့။ေိုက်ထဲကလဲ တစ်ခုခုကို စားချင်လာတာပေါ့။ စားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့ တစ်ခဏ ဘာစားချင်သလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်။ လျှာဖျားနားက ရသာရုံ ထိပ်ဖူးများက ဦးနှောက်ကို အပြင်းအထန် အလုပ်ပေးတယ်။ ဦးနှောက်က အရင်တုန်းက စားချင်တာတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို သိုမှီးထားတဲ့ Storage Memory Partition ထဲက ကောင်းနိုးရာရာ သင့်တော်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှာတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၁၅ စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်။
မာရီနာစကွဲက ၀က်နံကင်။ (မနေ့က N3 သတင်းလာပေးသွားတာ။)
ငါးခေါင်းချဉ်ရည် (ဂျူရောင်းက သယ်ရင်းက အလုပ်ပြီးရင် ၀င်လာခဲ့တဲ့။)
Bugis က ကြက်အရေခွံကင်။
၁၊ ၂၊ ၄ က ဝေးလို့ ပယ်လိုက်တယ်။ အနီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဘူဂစ်နားက ကြက်အရေခွံကို သွားစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ အလုပ်ဆင်းတာနဲ့ Tampines ကနေ အမ်အာတီ စီးသွားတယ်။ ဘူဂစ်ရောက်တော့ ဘူဂစ်ဂျန်ရှင်နားက ကုန်တိုက် မြေအောက်ထပ်(အေတီအမ် စက်တွေဘေးနားမှာ ရှိတယ်။) မှာ ရောင်းတဲ့ ကြက်အရေခွံ ကို သွားဝယ်ပြီး စားလိုက်တယ်။
အာသာပြေသယောင်တော့ ရှိသား။ ဒီညတော့ ညစာလွတ်ပြီ...။ စားပါဦးလား...။ ကြက်အရေခွံက တစ်ကင် ၁.၃ ကျပ်၊ ၀က်ကင် (ဘာအပင်ရိုးထည့်ထားမှန်း မသိ) က ၁.၈ကျပ်၊ ရိုးရိုး အကင်က ၁.၁ ကျပ်တဲ့ဗျား။
အော်.. လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ။ အာရုံငါးပါးနဲ့ ဒီရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပုပ်ကောင်ကို ဖက်တွက်နေကြတာ...။ အဲဒီ အာရုံငါးပါးတွေကလဲ ဒုက္ခ တွေပါလား...။
စားချင်တဲ့ သောက်ချင်တဲ့ ဒုက္ခ...။ ရသာရုံ လို့ခေါ်တယ်။
အထိအတွေ့ ကို စွဲလမ်းတပ်မက်မှု ဆိုတဲ့ ဒုက္ခ...။ ဖောဌဖအာရုံ။
အနံ့အသက်ကို စွဲလမ်းရတဲ့ ဒုက္ခ...။ ဂန္ထရုံ။
မြင်ရတဲ့ ကြည့်ရတဲ့ ဒုက္ခ....။ စက္ခုအာရုံ။
ကြားရတဲ့ နားထောင်ရတဲ့ ဒုက္ခ...။ သောတ အာရုံ။
ဖတ်ထားမှတ်ထားဖူးတာတွေပါ...။ အဲဒါတွေကို ကာမဂုဏ် အာရုံ ငါးပါး လို့ ခေါ်တယ်တဲ့...။ တဏှာဆိုတဲ့ လက်သမားက အဲဒီ ငါးပါးသော အာရုံတွေကို ထုပ်တန်း၊ အိမ်တိုင်၊ ခေါင်မိုး၊ နံရံ၊ တံခါးတွေနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ အိမ်လေးကို ဖက်တွယ်နေကြပါလား...။ ဒါတွေ ရေးလိုက်လို့ ဘွိုင်းဇ်တစ်ယောက် တောထွက်မယ်၊ မြို့ဝင်မယ် ထင်လား...။ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ဆိုတဲ့ စကားပုံက ဘွိုင်းဇ်အတွက်များ ထားခဲ့သလား ထင်ရလောက်အောင် ကျင့်သုံးနေပါတယ်....။ စိတ်ချ... သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေတဲ့ လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ် ဆားငံရေ ပင်လယ်ထဲမှာ လက်ပစ်ကူးနေမယ့် မောင်ပါ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:31 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:05 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
မဖြစ်သင့်တာတွေကို ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကို မိုးစက်မှုန်တွေက ပြက်ရယ်ပြုနေတယ်...။
စနိုးစနောင့် ဖြစ်လောက်စရာကောင်းတဲ့ မိုး၊ ဒီဇင်ဘာမှာ ရွာတဲ့ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးက ကိုယ့်ကို ပိုပြီးတော့ ဘောင်ခတ်လိုက်တယ်...။
ရွာယောင်ယောင် ၊ ဟိုယောင်ဒီယောင် လုပ်နေတဲ့ မိုးဖွဲစွေစွေက ကိုယ့်ခံစားချက် ဒီဂရီကို ပို ပို မြှင့်ပေးနေသလိုလို...။
စစ်ကြိုခေတ် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုလို မှုန်မှိုင်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က နောက်ကျိကျိနဲ့ ခံစားချက်အတွေးတွေကို ရှုပ်ထွေးသွားမတတ်...။
မောင်ပိုနေမြဲ ၊ ကျားနေမြဲလား...။
ရက်စွဲလွန်နေတဲ့ ပြက္ခဒိန်ပေါ်က ခြစားရက်စွဲတွေ အကြောင်း တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ရေကြည့်ရအောင်...။
ပုပ်သိုးမှုတွေ တစ်ရစ်ပြီး တစ်ရစ်ပေါ်လာ...။
မသိမသာနဲ့ အထပ်ထပ် ချည်နှောင်လာတဲ့ ဒီကြိုးဟာ နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာ ကိုယ့်ကို လှုပ်မရအောင် ချည်နေတဲ့ကြိုးဆိုတာ နောင်တတွေ ကျောင်းခန်းနဲ့ အပြည့်ရမှ သိလိုက်တဲ့ အဖြစ်...။
รักแท้ แพ้ใกล้ชิด တဲ့...။
မိုးတွေကတော့ စွေလို့ ညို့လို့ ကောင်းတုန်းပဲကွယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:23 AM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
- ပါကစ္စတန်က အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နူကလီးယားတပ်လှန့်ရေးကို စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြော။
- ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုကြာ ကိုမာ ဖြစ်ပြီး မေ့မျောနေခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သား တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားတယ်။
- ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ ဦးသန့် ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဦးသန့်ရုပ်ပုံပါ ကုလသမဂ္ဂ တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်မယ်လို့ ကြေငြာတယ်။
- Greek နိုင်ငံ Athens မြို့မှာ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားလို့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ပွားတယ်...။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို လောလောဆယ် ဖမ်းထားတယ်။
- အာဖဂန်နစ္စတန်ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားတွေကို ရိက္ခာပို့ဖို့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့ ကုလရိက္ခာ ယာဉ်တန်းကို တာလီဘန်သူပုန်တွေလို့ ယူဆရတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုက ချုံခို တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် ယာဉ်အစီးရေ ၁၅၀ ကျော် ပျက်စီးတယ်လို့ သတင်းရတယ်...
- အမေရိကန်နိုင်ငံ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဂျပန်စစ်လေယာဉ်များ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် နှစ်ပါတ်လည် အခမ်းအနားကို အမေရိကန်မှာ ကျင်းပတယ်...။ စစ်ပြန်အနည်းငယ်သာ ကျန်တော့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
- ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ ပြည်သူတွေ ၀မ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်နေတာကို ပုံမှန်ပါပဲလို့ ဆိုခဲ့တဲ့ သမ္မတာ မူဂါဘီကို နိုင်ငံအများက အပြစ်တင်နေပါတယ်။
- အမေရိကန် အတွင်းရေးမှုး ကွန်ဒိုလီဇာ ရိုက် က မွန်ဘိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပါကစ္စတန် အနေနဲ့ အိန္ဒိယ အစိုးရနဲ့ လေးလေးနက်နက် လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်တယ်။
- ထင်ရှားတဲ့ social networking site တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ face book ကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက် ဗိုင်းရပ်စ် koobface ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုး ပြန့်ပွားနေတယ်။
- အမေရိကန် သမ္မတ အသစ် အိုဘားမားက အမေရိကန် စီးပွားရေးဟာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကာလ ၊ နာလံထူစ ကာလ မတိုင်မီ အထိ အခုအချိန်ထက် ပိုဆိုးတဲ့ ကာလကို ရောက်နေဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း နိမိတ်ဖတ်သွားတယ်။
- ထိုင်ဝမ်(ကျွန်း/နိုင်ငံ???) က ရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆု တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရွှေမြင်းဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုကို Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro တို့ ပါဝင်တဲ့ Warlords ရှေးဟောင်းတရုတ် စစ်ကားက ရရှိသွားတယ်။ TZA တင်ဖူးတဲ့ Cape No.7 ကတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆု ၁၂ ဆု အနက် သုံးဆု သာ ရသွားတယ်။ စင်ကာပူမှာ လောလောဆယ် အဲဒီ ဇာတ်ကား ရုံတင်နေတယ်။
- ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ကြာ စစ်ဆေးနေခဲ့တဲ့၊ မိမိရည်းစားဟောင်းနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကို သတ်ခဲ့တဲ့ လူမည်း သရုပ်ဆောင် အိုဂျေ ဆင်မ်ဆန် ကို တရားရုံးက အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်။ အိုဂျေဆင်မ်ဆန် အနေနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ၃၃ နှစ်ကြာ မိုက်ကြွေး မိုက်ပြစ်များ ပေးဆပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ (ထပ်ဖြည့်။ ။ ဓါးပြတိုက်ခဲ့တဲ့ အမှုအတွက်ပါ။ လူသတ်မှုတုန်းကတော့ လွတ်ခဲ့ပါတယ်။)
- အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကနေ ပြည်ပကို တင်ပို့နေတဲ့ ၀က်သားများထဲမှာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းများ တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ဈေးကွက်ထဲမှာ ချက်ချင်းပဲ ပြန်ရုပ်သိမ်းနေပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အရေးပေါ် အဆိုပါ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက ၀က်သားများကို ချက်ချင်း သိမ်းဆည်းဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
(ဤတွင် ယခု တစ်ပါတ် News Round up အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသည်။ နောင်တွင် ကြုံလျင် ကြုံသလို တင်ပေးမည်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:33 AM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် တန်ပြန် သက်ရောက်မှု ရှိသည်တဲ့...။
ကမ္ဘာကျော် တွေးခေါ်၊ သချာင်္ပညာရှင်ကြီး နယူတန်က အဆိုပါ တန်ပြန်နိယာမကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်...။
မှန်သာ မမှန်သာ အပထား။
အခုထိတော့ သိပ္ပံပညာရှင်များကတော့ အဆိုပါ နိယာမအဟောင်းကို ဖက်တွယ်ထားဆဲပင်။
(ရူပဗေဒ ပညာရှင်များက အများစုပေါ့...။)
မမှန်ဘူးလို့လဲ ဘယ်သူမှ မပြောကြ...။
သက်သေပြနေရမှာ စိုးလို့ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး မည်သူကမှ မမှန်ကြောင်း သက်သေ မပြချေ။
ပြန်ကောက်ရသော် နယူတန်၏ နိယာမ အတိအကျ ဆိုရသော် Newton's Third Law of Motion တွင် ဆိုထားသည်မှာ
“Every force causes an equal force opposite in direction. When the tires applyaforce to the ground, the ground pushes back with an equal force”
သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် ယင်းနှင့်ညီမျှသော တန်ပြန် သက်ရောက်မှု ရှိပါသတဲ့...။
ယင်းဥပဒေသသည် နယူတန် ကျင်လည်ခဲ့သော ရုပ်ဝတ္ထု ပတ်ဝန်းကျင်၌သာ မှန်ကန်မှု ရှိလေသည်တကား...။ အို အသင် နယူတန်... အသင်သာ အခုအချိန်အထိ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် အသင့်ရဲ့ နိယာမတွေဟာ အလုံးစုံ မှန်ကန်မှု မရှိတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နယူတန် စတုတ္ထ နိယာမ တင်မကပဲ ပဉ္စမ ၊ ဆဌမ နိယာမ စသဖြင့် ထုတ်ရမှာ ထင်ပါတယ်...။
ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ကြေကွဲခြင်း အပိုင်းအစတွေ ပျံ့ကျဲနေတယ်...။
တစ်ချို့တစ်ဝက်သော မကျေနပ်ခြင်းတွေက ကခုန်နေလေရဲ့...။
အလိုမကျခြင်းများနဲ့ မွန်းလှောင်နေတဲ့ အဆုတ်ထဲက လေကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရှိုက်ထုတ်လိုက်တယ်...။
တန်ပြန် သက်ရောက်မှု မရှိတဲ့ ကနဦး သက်ရောက်မှုများကို နောင်တရမိတယ်...။
အစကတည်းက ပရမ်းပတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းညှိဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိုက်မဲမှုတွေကို ပြန်ပြင်ဖို့ အတွေးတစ်စ ဆုပ်ငင်မိတယ်...။
လမ်းချော်သွားတဲ့ အယူအဆကို လမ်းကြောင်းပြန်တည့်မလား...။
စိတ်အလိုကို လိုက်ပြီး လမ်းဟောင်းကိုပဲ ဖက်တွယ်လေမလား...။
ဖြစ်ချင်တာတွေထက် ဖြစ်သင့်တာတွေသာ ပြွမ်းထုံခဲ့တဲ့ ဒီ ကမောက်ကမ အခြေအနေကို ဘယ်အထိ ရင်နာနာနဲ့ လက်ခံနေရဦးမလဲ...။
တစ်စုံတစ်ခုသော၊ နောက်ထပ်သော ပရမ်းပတာဖြစ်ရပ်တွေ ၀င်မလာမချင်းအထိတော့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားရဦးမှာပါပဲလေ...။
နားလည်မှုများ ပြန်လည် သင့်မြတ်မယ့် နေ့တစ်နေ့ကို ကြေကွဲခြင်းများနဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေရင်း...။
(တစ်ပါးသူ နားမလည်စေချင်လို့ အထက်က စာကို လူ နားမလည်နိုင်အောင် အတတ်ဆန်း ရေးထားပါတယ်။ နားမလည်ဘူးလို့ ခံစားရလျင် သင်သည် ပုံမှန် ဖြစ်ပါတယ်...။ နားလည်ပါတယ်လို့ ဆိုလာခဲ့လျင် ဒီစာဟာ အသင့်ကို ရည်ညွှန်းတာလို့ မှတ်ယူနိုင်ပြီး တစ်ယောက်ထက်ပို နားလည်ခဲ့ရင်တော့ အဲဒီ တစ်ယောက်ထက် ပိုတဲ့ တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာနေတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါရစေ...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 6:25 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
နွေးထွေးသော နေရောင်ခြည်အောက်တွင် ပန်းရောင်စုံများနှင့် အပြောကျယ်လှသော ပန်းပင်လယ်ကြီး...။
မနက်ခင်း ဆောင်းနှင်းရည်ကို သောက်သုံးရသဖြင့် လတ်ဆတ်စွာ ငွားစွင့် ပွင့်လန်းနေသော ရောင်စုံပန်းပွင့်တစ်ပွင့်...။
၀တ်ရည်အပြည့်ဖြင့် အစွမ်းကုန် လှပ ဖူးအာနေ၏။
ဆွတ်ချူလှည့်ပါ ... သောက်သုံးလှည့်ပါ... ဟု ဖိတ်ခေါ်နေသည့်အလား...။
ကိုရွှေပိတုန်း၊ ပျားမောင်ဖုန်းများသည် ဟိုမှ သည် လူးလာပျံသန်းကာ ပျားပန်းခပ် လှုပ်ရှားနေ၏။
ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် ပျံသန်းနေသော လိပ်ပြာငယ်သည် အလှဆုံး ပန်းတစ်ပွင့်ကို ရွေးချယ်ရန် စိတ်စောနေ၏။
ဟိုးအဝေး တောင်တန်းများဆီမှ အပြောကျယ်လှသော ဤရောင်စုံပန်းခင်းဆီသို့ အားစိုက်ကာ အရောက်သူလာခဲ့ရ၏။
လေညှင်းလေးများ သယ်ဆောင်လာသော ပန်းရနံ့များကို ခြေရာခံလျက် မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာသော အရပ်ကို သူ အားစိုက်လာခဲ့ရ၏။
လေဆန်ကို မကြောက်၊ ဆောင်းချမ်းကို အံတု၊ နေပူကို ကြံ့ကြံ့ခံလျက် ဦးတည်ရာအရပ်ကို တူရူ ရောက်လာခဲ့၏။
အရှေ့ဆီမှာ ရတနာပန်းခင်းတစ်ခု သူ့ကို ကြိုဆိုလျက်...။
Edward Lorenz ဟူသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သူ့အမျိုးအနွယ်များနှင့် ပါတ်သက်၍ လွန်မင်းစွာ ဖွဲ့ဆိုတတ်ချေ၏။
ကမ္ဘာ့ တောင်ဘက်ခြမ်းမှ လိပ်ပြာတစ်ကောင် တောင်ပံခတ်လိုက်သည်၌ ဆင့်ကဲ ဆိုသလိုပင် အခြားသော ကမ္ဘာ့ တစ်ဘက်ခြမ်းတွင် အားပြင်းသော မုန်တိုင်း တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ သီအိုရီကိုပင် လိပ်ပြာတောင်ပံအကျိုးဆက် ဟူ၍ပင် တီထွင် ဖေါ်ထုတ်ခဲ့လေသည်။ အကျယ်ကိုမူ အဆိုပါ သီအိုရီကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားသည့် ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
လိပ်ပြာတောင်ပံ အကျိုးဆက်ဆိုသည်မှာကား ပရမ်းပတာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ ကနဦးအစပျိုး ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို တင်စား ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ချေသည်။ အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားနေသော စံနစ်တစ်ခု၏ ကနဦး အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ် သည် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး၏ အကျိုးဆက်အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။
လူပြန်းနားလည်အောင် ပြောရချေသော် မိမိ အမှတ်မထင် ပြုလိုက်မိသော အပြုအမှု တစ်ရပ်ရပ်သည် မိမိနှင့် ပါတ်သက် ဆက်နွယ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ အသင်းအပင်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အပေါ်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတတ်သည့် သဘောကို ဆိုလိုလေသည်။
Lorenz မှ အဆိုပါ သီအိုရီ သဘောတရားကို ၄င်း တီထွင်ထားသော Attractor နှင့် စမ်းသပ်ပြရာတွင် အောက်ပါ ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့လေသည်။
တူညီသော Three-dimensional evolution ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင် အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကို နေရာအနည်းငယ်သာ ခွာ၍ ထုတ်လွင့်ကြည့်ရာ ရလဒ်မှာ အချိန်ကာလာ ကြာမြင့်လာလေ လမ်းကြောင်းသွေဖည်မှု ပိုများလာလေကို တွေ့ရှိရလေသည်။
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင့် မုန်တိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သကဲ့သို့ လိပ်ပြာတစ်ကောင်၏ ရင်ခုန်သံနှင့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျဥည့် တောင်ပံ ခတ်သံသည်လည်း အားကောင်းခက်ထန်သော မုန်တိုင်းတစ်ခုဆီသို့ ဦးတည် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သလို ပန်းပွင့်လေပြေ တစ်ခုအဖြစ်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်ချေ၏။
မဆိုင်တာတွေကို ဆွဲပြီး မဆိုင်ဆိုင်အောင်သာ ရေးထည့်လိုက်ရတယ်...။
မရည်ရွယ်ပဲ တိုက်ဆိုင်သလို ဖြစ်သွားတာတွေအတွက် ၀မ်းနည်းပါတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:28 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။